INAN YAR OO SOOMALIYAD 8 SANO JIR AH OO CUNSURIYAD AWGEED TAREEN LOOGA TUURAY FINLAND | Toggaherer's Weblog
Amal Farah Abdi waa Inan Yar oo Sideed sano jir ah AYAA iyada oo dooneyesa in ay Tareen ka raacdo badhtamaha magaalada Espoo ee dalka Finland uu Nin Saan-Cadaale ahi Albaabka Tareenka xoog uga soo tuuray oo dhabar dhabar dhulka ugu dhacday.
Sida ay dad goobjoogayaal ah iyo Amal laf ahaanteeduba xaqiijiyeen Ninkan Saan- Cadaalaha ahi oo sida muuqata u dhashay dalka Finland ayaa markii uu Amal Irida Tareenka ka soo tuurayay ku qeylinayay erayo Cunsurinimo, isir-naceyb iyo midab takoor kulansaday waxaana hadaladii afkiisa sida axmaqnimada ah uga soo burqanayay ka mid ahaa; ” Ka wareeg horteyda, Daanyeer yahay Yari”.
Amal Farah Abdi markii falkan naxdin leh ee Shuruucda Caalamka aan meelna ka soo gelin lagula sameeyay xarunta Tareenada ee Badhtamaha magaalada Espoo ayaa waxay ka timi Goob Ganacsi oo aabaheed ku leeyahay Rugta Ganacsiga ee badhtmaha Espoo waxayna ku sii jeeday gurigooda.
Inkastoo Booliska Espoo laga diiwaangeliyay Dembigan Cunsurinimada ah ee Amal lagula kacay ayey hadana weli Boolisku sheegayaan in aysan soo qabin Ninkii falkan geeystay waloow saldhiga Tareenada afartiisa dhinac ay ku lushaan Kaamaradaha duuba dhacdooyinka iyo dhaqdhaqaaqa.
Saxaafada dalka Finland gaar ahaa jariirada ugu afka dheer looguna akhriska badan yahay ee Helsingin Sanomat ayaa labadii maalin ee la soo dhaafay aad uga faalootay una faahfaahisay sida wax u dheceen waxaana xusid mudan in dib loo jaleecay falkan foosha xun iyo saameynta uu ku yeelan karo Bulshada ku nool dalkan gaar ahaan Mujtamaca Soomaalida.
Halkan ka Hoose ka Akhriso Wargeysyadu waxa ay ka qoreen Falka Cunsurimo